Ubuntu Studio inodhinda yemahara gwara rekugadzira odhiyo neFree Software | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu Studio inodhinda yemahara gwara rekugadzira odhiyo neFree Software
Imwe yehunyanzvi hweUbuntu flavour yakaburitsa yepamhepo gwara rekugadzirisa odhiyo neFree Software. Iyo yepamutemo flavour inonzi Ubuntu Studio, yepamutemo kuravira iyo inotarisa pane multimedia kugadzirwa uye graphic dhizaini neUbuntu seyakavimbika hwaro hwayo ese ayo.
Ubuntu Studio inovhenekera zviri pamutemo izvo zvishoma zvitsva zvave zvichisanganisira mumakore apfuura. Kusvika padanho rekuti vashandisi vazhinji vakachinja kugovera kufunga kuti chirongwa chakasiiwa.Asati aburitswa Ubuntu 18.04, timu yeUbuntu Studio yakazivisa kuti inotevera vhezheni yehunyanzvi yepamutemo ichave yakasiyana pane zvaitarisirwa kunyangwe zvicharamba zvichibva paUbuntu. Asi pamberi penyaya idzi, timu yeUbuntu Studio yatishamisa nayo gwara remahara rekugadzira odhiyo neFree Software. Iyo yakazara yakazara gwara iyo yaisazove yakanyatso tariswa kuUbuntu Studio asi kune Mahara Software mapurogiramu isu atinogona kuisa nekushandisa mune chero Gnu / Linux kugovera.
Kunyange chiri chokwadi kuti gwaro iri harisi chirongwa chinotibatsira nerimwe basa; hongu aya akanaka mashoko uye chishandiso chakakura nekuti vanopfuura mumwe mushandisi vachadzidza kugadzira ma audios nemumhanzi nemaFree Software maturusi. Tinogona kuona uyu mutungamiri kuburikidza Iyi link. Mukati medu tinogona zvakare kuwana iwo iwo iwo gwara mu pdf fomati mune isiri kure kure ramangwana.
Uye kana izvo zvatiri kutsvaga iko kugadzirisa vhidhiyo kana chidzidzo chekubata Mahara Software maturusi muSpanish, tinogona kubvunza iyo PodcastLinux vhidhiyo chiteshi, uko Juan Febles anotidzidzisa nhanho nhanho mashandisiro eShotcut chishandiso kugadzira uye kugadzirisa vhidhiyo.
Muzhinji ndinofunga kuti aya madhairekitori kana ma tutorials anenge ari nani pane matsva ekuparadzira kana kushambadzira kushambadzira, kubvira vanodzidzisa vashandisi vekupedzisira kushandisa maturusi aya nekuti kana vasingazive mashandisiro awo, hazvina zvazvinobatsira kuti vazive kuvepo kweFree Software. Ndinovimba izvi zvirongwa hazvimire uye zvimwe zvakawanda zvinoonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Studio inodhinda yemahara gwara rekugadzira odhiyo neFree Software
Chengetedza mari yako uye wega accounting neKeBankBank
Nyowani yakagadzika vhezheni yeRaspbian yeRaspberry Pi ine zvakawanda zvinogadziridzwa